Xog: Hub ku soo qulqulaya Muqdisho iyo goobaha lagu kala iibsado oo... - Caasimada Online
Home Warar Xog: Hub ku soo qulqulaya Muqdisho iyo goobaha lagu kala iibsado oo…
Xog: Hub ku soo qulqulaya Muqdisho iyo goobaha lagu kala iibsado oo…
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa magaalada Muqdisho si xooli ah ugu soo qulqulaaya Hubka noocyadiisa kala duwan oo magaalada lagu soo galiyo qaab sharci darro ah.
Hubkaani ayaa waxaa lagu kala iibsadaa goobo qarsoodi ah ku yaalla magaalada Muqdisho, Suuqa-Bakaaraha, dhabarka danbe ee Wasaarada Amniga iyo Eeryada Wasaarada Arrimaha Gudaha.
Hubkaani ayaa sifo sharci darro ah uga soo dega Dekadda weyn ee magaalada Muqdisho, iyadoo Ganacsatada uu Hubka usoo degaayo laga qaado lacago laaluush ah.
Ganacsatada Hubka kala soo dega Dekadda Muqdisho ayaa xiriir fog la leh Maamulka ugu sareeya ee Dekadda, waxaana jira xiriir dhexmara ka hor inta uusan Markabka ama Doonyaha dheereeye soo gaarin Xeebaha Somalia, iyadoo taa laga damcsan yahay in maamulka Dekadda uu badbaadiyo Hubka sharci darada ah, taa bedelkeedana lasiiyo dhaqaale xoogan si aan Caqabad loogu noqon dejinta Hubka.
Hubka ugu badan ee sharci darada ah ayaa lagu iibiyaa dhabarka danbe ee Wasaarada Amniga waxa ayna tani shaki galisay Nabadgalyada Somalia, gaar ahaan Magaalada Muqdisho, marba haddii Hubka sharci darada ah lagu kala iibsanaayo dhabarka danbe ee Wasaarada.
Sidoo kale, Hubka ugu badan ee sharci darada ah ayaa lagu iibiyaa meelo aan sidaa uga sii fogeyn Xarumaha Dowlada, halka Dowladuna ay tahay mid ka caagan ka dhabeynta la dagaalanka Hubka Sharci darada ah.
DFS ayaa waxaa ku adkaan doonta inay la dagaalanto Hubka sharci darada ah maadaama Ciidamada Dowlada qudhooda ay xuquuq la’aan isaga iibiyaan Hubkii loogu tallo galay inay kula dagaalamaan cadowga.